Naphezu kweqiniso lokuthi sokukhulelwa ngokwayo esabekwa nemvelo, nkathi ekuphileni sowesifazane kunzima ngempela futhi eziyinkimbinkimbi. Izinkinga zempilo ngaphambilini eyayitholakala esikhathini yabakhulelwe ungase uqale ukuvela phakathi nalawo masonto angu-40. Futhi ngezinye izikhathi omama abanempilo, azalele, ukuxakeka sokukhulelwa uqale.
Omunye ngezinto ezikhathaza abesifazane, is zokubona ngesikhathi sokukhulelwa. Kufanele kuqashelwe ukuthi igazi eligeleza aphume emomozini sowesifazane esimweni, kanye ngenyanga, a zokugula, kunokuba kuyinsakavukela. Futhi umama okhulelwe kumele bazi ukuthi ukuthola igazi ndawo, kuzwakala, kufanele ngokushesha uthintane udokotela wezifo zabesifazane.
Izizathu ukuthi uqala ukopha ngesikhathi sokukhulelwa, kuncike eside. Bloody osenyameni sokukhulelwa ekuseni singenzeka ngenxa yokuthi ngale ndlela iqanda eselivundisiwe esibelethweni uzama ngesinyenyela. Kulokhu, igazi izogcina for 1-2 izinsuku. Lutho esibi kule. Ngaphezu kwalokho, ukushintsha kwama-hormone aqala lapho sokukhulelwa kwenzeka wonke umzimba, okuyinto ingadala ukopha. Abantu abaningi ukudida ngayo ngenyanga, ngakho uma uke beba nobuhlobo bobulili olungavikelekile, ukuthenga ukuhlolwa okukhethekile noma vula egazini ukucacisa uhlobo ukopha.
Kodwa ukopha esindayo ephelezelwa cramping esiswini, kungase kubonise ukukhula komntwana ethunjini. Futhi kulokhu edingekayo esibhedlela esiphuthumayo yokususa umbungu.
Ngaphezu kwalokho, ukubeka amabala ngesikhathi sokukhulelwa kungenzeka kube umphumela previa noma abruption esinomhlapho. Thola ke kungaba Udokotela inhlolovo, indlela kakhulu ulwazi ukuxilongwa kuleli cala - a ultrasound transvaginal. Uma placenta ongahlabeki umxhwele, kodwa kuphela kunosongo, udokotela ngokushesha ezomisa ukwelashwa kudingekile, emva osenyameni umzanyana kuyingozi kakhulu ukuphila kokubili kamama, nokunye, ukuze ingane.
Imbangela ukopha sokukhulelwa ekuseni nakho kungase kube ingozi zomsebenzi kwesisu noma nokuguqulwa. Kunoma ikuphi, akudingekile uyephuza ukwelashwa udokotela, njengoba ngisho imizuzu embalwa kamuva ekukhulelweni kungaba juqu.
Uma ukopha ngesikhathi sokukhulelwa uvele ungene ngesiwombe sesibili, ebaluleke kakhulu futhi iyingozi kungenzeka imbangela esinomhlapho abruption. Ngaphambi kokuvakashela udokotela, cabangela lokho izizathu ayesengayigcina ukopha akwenza, njengoba uma lamabutho akuyona kutholakala ukuthi uphethwe yini, udokotela Kuzofanela ukuthi wazi ezingase avuse ukubukeka khulula. Uma une ukuguguleka komhlabathi, ukopha kungenzeka emva kocansi, ngoba ingcindezi ivuliwe wesibeletho. Futhi, ngesizathu kungaba ukushaqeka eqinile sezinzwa futhi nomthelela lokukhanda.
Esinye isizathu sokuba ukubukeka igazi engxenyeni yokukhulelwa wesibili -nachinayuschiesya zabasebenzi nokuguqulwa.
Uma ukopha ngesikhathi sokukhulelwa yavela ngemva amasonto 37, futhi ngeke kunezibhamu eziningi, kungase kuyisandulela ekuqaleni ukulethwa. Owesifazane for 3-4 amasonto ngaphambi kokubeletha uqala ukunyakaza kude isikhwehlela ipulaki, ohlanganisa wesibeletho, ngaleyo ndlela ukukhulula emgudwini wokuzala. Ukopha kulokhu akuyona ziyinsada, futhi ngokuvamile ngaphandle kobuhlungu.
Izifo ezithathelwanayo izitho zobulili, yofuzo, kanye lesizalo fibroids phezu ukuphila kungabangela zokubona.
Ngesikhathi ekhulelwe owesifazane kufanele sikhumbule ukuthi kulesi sifundazwe kungabikho khulula. Futhi ekuqaleni ukopha kunoma yisiphi isigaba esiyosho ukuxakeka. Uma usuwatholile iyiphi Ukukhetha ngokushesha, ngaphandle kokulibala, xhumana nodokotela wakho. Ukushesha wenza kanjalo, amathuba ngaphezulu kufanele athwale futhi ubelethe ingane ephile saka. Futhi noma kunjalo, akukho self, akukho ngowabo nengane babo abangakazalwa!
"Viferon" ngesikhathi sokukhulelwa, senyanga 2: Yokusetshenziswa nempendulo
Kanjani esifubeni upruzhe? Amathiphu Imiyalelo
Njengoba e "Vormikse" uwine umzingeli ngaphandle kwezinkinga?
Kanjani ukwakha design eliphezulu zabesifazane izingubo esitolo?
Isifunda kohlelo bafudumale. Ukufakwa bafudumale izinhlelo. Ukushayela ikhaya Ukushisa
Dota 2 ngeke ukuqala? Kukhona isixazululo!
"Avtozavodskaya" metro station e Moscow